Sidee u fududeyn kartaa iPhone Screen White Screen of Death
IPhone & iPod Astaamaha
Sidee Si Fiican Looga Yaabsiin Lahaa iPhone Screen White Screen of Death
Ma iPhone (ama iPad) oo muujinaya shaashad cad? Isku day shan sheyaal
Haddii shaashaddaada iPhone ay gebi ahaanba cad tahay oo aan muujineynin wax muuqda ama barnaamijyo, waxaa muuqata dhibaato. Waxaa laga yaabaa inaad la kulantid iPadka Cadaanka ah, Screen White Screen of Death. Magacaas wuxuu ka dhigayaa mid cabsi leh, laakiin waa wax laga xumaado inta badan kiisaska. Ma aha sida haddii taleefoonkaaga uu rabo inuu qarxo ama wax kasta.
The White Screen of Death ee iPhone yar ayaa inta badan ku nool ilaa magaceeda. Tallaabooyinka lagu sharraxay qodobkan ayaa ku xiri kara xaalado badan.
Sababaha ka mid ah iPhone White Screen
A White Screen iPhone ayaa sababi kara waxyaabo badan, laakiin labadooduba waa kuwa ugu badan:
Cusboonaysiinta barnaamijyada khatarta ah ama jailbreak - Marka aad isku daydo inaad cusboonaysiiso nidaamka hawlgalka iPhone oo casriyeyntu ku guuldareysato, mararka qaarkood waxaad arki doontaa shaashadda cad. Tani xitaa waa wax caadi ah markaad isku dayeyso in aad jebiso iPhone-gaaga iyo wax sababi karo xabsiga in uu ku guuldareysto.
Dhibaatada qalabka ah - Haddii softwareku aanay ahayn kuwa culus, muraayadda cad ayaa badanaa sababtaa xadhigga xarkaha iPhone-ga ee muraayad-kiciyaddiisa si ay u dabacdo ama jabto. Xaaladaha qaarkood, tani waxay si fudud u tahay natiijada qalalaas la'aanta. Kuwa kale, xiriiriyaha ayaa soo galaya kadib marka telefoonka la tuuro.
Tani ma xallin doonto dhibaatada inta badan, laakiin waxaa jirta fursad ka baxsan inaadan haysanin Screen Screen of Death. Taa bedelkeeda, waxaa dhici karta in si khalad ah loogu soo jeestay shaashadda korantada. Haddii ay sidaas tahay, waxaa suurogal ah in aad ku dhowaato meel aad u dhow oo ku taal wax caddaan ah, taas oo u eg sida shaashad cad. Wixii dheeraad ah oo ku saabsan dhacdadan, akhri My Icons My iPhone waa Large. Maxaa dhacaya ?
Si aad u hagaajisid kor u qaadida, saddex farood oo wadajir ah ka dibna u adeegso inay labalaabaan shaashadda. Haddii shaashaddaada la weynaado, tani waxay dib ugu soo celineysaa aragtida caadiga ah. Dammi waynaanta ku dheji Settings -> Guud -> Gaaritaanka -> Dhawaaqa -> Kaga bax .
Fariin Cusub iPhone
Inta badan talaabada ugu fiican ee lagu xalliyo wixii dhibaato ah ee iPhone ah waa in la bilaabo iPhone . Xaaladdan, waxaad u baahan tahay dib u bilaabid awood leh oo xooggan oo la yiraahdo dib u dajin adag. Tani waa sida bilawga ah laakiin aadan u baahnayn inaad awoodid inaad aragto ama taabato shaashaddaada-taas oo fure u ah haddii aad leedahay shaashad cad oo aan waxba ku jirin. Waxa kale oo ay ka tirtirtaa xasuusta badan ee iPhone (ha ka welwelin, ma luminaysid xogtaada).
Si aad u sameyso dib u habeyn adag:
Qaado badhanka Guriga iyo badhanka / off-off ee isla waqtigaas (on iPhone 7, hana bedesho badhanka hoose iyo hurdada / tooska ).
Hayso haysashada illaa shaashadda oo u muuqata mid calaamadeysan.
Aan ka tagno badhamada oo u ogolow in iPhone uu u bilaabo sida caadiga ah.
Sababtoo ah iPhone 8 wuxuu leeyahay tignoolajiyo kala duwan oo ku jira badhanka Home, iyo sababta oo ah iPhone X ma laha badhanka Home at dhan, habka dib u habeyn adag oo xoogaa ka duwan. On models ah:
Riix badhanka codka oo sii daa.
Hoos u jiifso hurdiga / qulqulka (aka Side ) ilaa iyo inta uu telefoonka dib u bilaabayo. Marka calaamadda Apple ay soo baxdo, iska dhaaf badhanka.
Ku Qabo Guriga Hore & # 43; Volume Up & # 43; Awooda
Haddii dib-u-habeyn adag oo aan la sameynin khiyaamada, waxaa jira isku-darka kale oo isku-dhafan oo ka shaqeeya dad badan:
Qaado badhanka guriga , badhanka mugga , iyo awooda ( hurdo / tooska ) badhanka oo dhan.
Waxay qaadan kartaa wakhti, laakiin waa inaad haysan ilaa inta uu shaashadda ka baxayo.
Sii wad in aad haysatid badhannadaas ilaa iyo inta laga helayo calaamada Apple.
Marka astaamaha casriga ahi ay muuqdaan, waxaad sii deyn kartaa badhka iyo sii deynta iPadka sida caadiga ah.
Sida iska cad waxan kaliya la shaqeysaa moodhadhka iPhone oo leh badhanka guriga. Waxay u badan tahay inaysan la shaqeyneyn iPhone 8 iyo X, oo laga yaabo inaanay la shaqeynin 7-da. Weli lama hadal haddii ay u dhigantaa tan tan ku jirta moodooyinkaas.
Isku day Habka Recovery iyo Dib u soo Celinta Bixinta
Haddii mid ka mid ah xulashooyinkaa aysan shaqeynin, talaabadaada xigta waa inaad isku daydid inaad iPhone ku soo celiso Nooca Raysashada . Dib-u-qabashada Mashiinka waa qalab awood leh oo ku saabsan wax kasta oo dhibaatooyin software ah oo aad ku haysato. Waxay kuu ogolaan doontaa inaad dib u cusbooneysiiso fayraska iyo soo celinta xogta la duubay ee iPhone. Si aad u isticmaasho:
Ku xiro iPadkaaga kombuyuutarkaaga.
Waxa aad ku xiga waxay ku xiran tahay qaabka aad iPhone:
iPhone X iyo 8: Riix oo sii daaya mugga , kadibna hoos u dhig . Riix oo hayso hurdiga / qulqulka (aka Side ) ilaa shaashadda Recovery Mode (icon iTunes leh tilmaam calaamad).
Qalabka iPhone 7: Riix oo hayso weelasha hoose iyo dhinaca badhka ilaa shaashadda Recovery Mode.
iPhone 6s iyo ka hor: Riix oo hayso guriga iyo hurdada / hurdada / hurdada ilaa inta laga helayo shaashadda Recovery Mode.
Haddii shaashadda ay ka soo noqoto caddaan illaa madow, waxaad ku jirtaa Nidaamka Dib u Dhiska. Waqtigan xaadirka ah, waxaad isticmaali kartaa tilmaamaha sawirada ee iTunes si aad u soo celiso iPadkaaga.
FIIRO GAAR AH: Calaamadda Apple-ga ayaa soo bixi doonta ka hor inta aan shaashadda dib u soo celin. Hayso hayn ilaa aad aragto icon icon.
Isku day DFU Mode
Cusbooneysiinta Qalabka Dab-demiska (DFU) Habka ayaa ka xoog badan marka loo eego Raysashada. Waxay kuu ogolaaneysaa in aad soo jeediso iPhone laakiin waxa ay ka hortageysaa in laga bilaabo nidaamka qalliinka, taas oo kuu ogolaanaysa inaad isbeddel ku samayso nidaamka qalliinka laftiisa. Tani waa mid aad u adag oo qallafsan, laakiin waa u qalantaa in la isku dayo haddii wax kale aysan shaqeynin. Si aad taleefankaaga u geliso DFU Mode:
Ku xiro iPadkaaga kombuyuutarkaaga oo bilaawdo iTunes.
iPhone X iyo 8: Riix oo hayso badhanka dhinaca ilaa 3 ilbiriqsi. Hayso dabagalka dhinaca dambe kadibna riix badhanka mugga . Ku hay labada badhka illaa 10 ilbiriqsi (haddii uu calaamad u muuqdo Apple, waxaad u baahan tahay inaad mar kale bilowdo). Buufiya dhinaca badhanka, laakiin hayso hoos u dhig ilaa 5 ilbidhiqsi. Ilaa iyo inta uu shaashaddu ku madhan yahay madow oo uusan muujin shaashadda Naqshadeenta Recovery, waxaad ku jirtaa qaabka DFU.
Qalabka iPhone 7: Riix dariiqyada iyo badhanka hoose ee isku mar. Ku hay ilaa 10 ilbidhiqsi (haddii aad aragto calaamada Apple, mar kale bilow). U ogolow badhanka dhinaca kaliya oo sug 5 ilbiriqsi kale. Haddii shaashaddu madow tahay, waxaad ku jirtaa qaabka DFU.
iPhone 6s iyo xilli hore: Qabo guriga iyo hurdo / hurdo toosan ilaa 10 ilbidhiqsi. Dhiibaan badhanka hurdada / qowlka oo ku hay 5-ilbiriqsi kale. Haddii shaashadda ay madow tahay, waxaad gelisay qaabka DFU.
Raac tilmaamaha qorraxda ee iTunes.
Haddii aan midkoodna shaqaynin
Haddii aad isku dayday dhammaan tallaabooyinkaas oo aad weli haysatid dhibaatada, waxaad u badan tahay inaad heshay arin aadan adigu xalin karin. Waa inaad la xiriirtaa Apple si aad ballan uga samaysato Dukaankaaga cusub ee xaafaddaada si aad u hesho taageero.
Ku rakibida iPod touch ama iPad White Screen
Maqaalkani wuxuu ku saabsan yahay sameynta iPhone White Screen, laakiin iPod touch iyo iPad waxay yeelan karaan dhibaato isku mid ah. Nasiib wanaag, xalalka iPad ama iPod taabashada White Screen waa isku mid. Dhammaan saddexda qalab waxay wadaagaan qaybo badan oo ka mid ah qalabyada hardware isla markaana maamula nidaamka hawlgalka, sidaas darteed wax waliba oo ku xusan qodobkan ayaa ku caawin kara in la hagaajiyo iPad ama shaashadda taabashada muraayadaha iPod.
IPhone Ma Diidi Karaan? Halkan waa sida loo Qeexo In
Maxaad Sameyn Kartaa Marka Aan Joogsanayn iPhone
Baro habka fudud ee loo wanaajin karo Wi-Fi-ga Wi-Fi ee iPhone
My iPhone Ma Samayn Dey! Maxaan sameeyaa?
Sidee loo xalliyaa khalkhalka Safari ee iPhone
Sida Loo Helo Ikhtiyaar AirPlay Icon
Sida Loogu Dhowo iPod nano si aad u bilowdo Dhibaato ka dib
Maxaad Sameyn Kartaa Marka Loo Yidhaahdo iTunes Ma Leeyn Tirooyinka CD-yada Muusikada
Maxaad Sameyn Kartaa Marka Aadeeshinkaaga Aan ku Hadlin SIM
Nidaamka Ammaanka Gawaarida
Nalka Meelaha iyo Saamaynta Goobta iftiinka
Waa maxay Bluetooth 5?
Baro sida loo helo Mushaaro Muusik oo bilaash ah ee Amazon Music Music
Sida loo soo diro ZIP-Files Diiwaanka Emailka
Epson PowerLite Home Cinema 710HD Projector 3LCD
Excel 2007 Fadlan Daab Lahaansho
Dib u Eegista Qalabka Madadaalada ee Qoyska (XONE)
Waa maxay TOSLINK Audio Connection? (Qeexitaanka)
The 7 Plugins Best WordPress ee 2018
ATX12V iyo qalabka ATX Power
Sida loo Maamulo Ogeysiiska Rugta Safarka ee safari ee OS X
Fox Guardian - Wii U Dib-u-eegid
Qorshaha Mareykanka ee Doorashada 65-ka ee Qalabka Telefoonka ah ee Verizon
Sida loo Isticmaalo Sawirrada iPhone
Dib u eegid: Macmiilka Bean ee macmiilka
Samsung UN46F8000 46-inch LED / LCD Smart TV - Sawiro Sawirada
Dhibaatada Raadiyaha HD
Maxay '' IM '' iyo 'Instant Messaging'?